Topnews:Ginbot 7-oo sheegtay inay Gubeen 14-Gaadiidka dagaalka ah iyo sargaal 2-aad ee u sareeyay Ginbot oo is dilay. | ogaden24
Topnews:Ginbot 7-oo sheegtay inay Gubeen 14-Gaadiidka dagaalka ah iyo sargaal 2-aad ee u sareeyay Ginbot oo is dilay.
Sargaal u hadlay Jabhada Amxarada ee Ginbot 7- ayaa sheegay inay ciidankiisu dagaalada 2-dii maalmood ee lasoo dhaafay kasocday duleedka Gonder ay khasaarihii ugu cuslaa ugu Gaysteen ciidamada TPLF.
Warbaahinta kala duwan ee Amxarada oo soo xiganaya saraakiisha Hogaaminaysa maleeshiyada Ginbot 7 ayaa sheegay in 14-kamida Gaadiidkii dagaalka oo ay kamid yihiin Taangiyo Beebeeyo iyo Gawaadhida Uraalka loo Yaqaano inay Gubeen intii ay socdeen dagaaladii u dambeeyay.
Dhinaca kale waxaa is dilay Taliye kamida saraakiishii ugu sareeyay ciidanka Jabhada Ginbot 7- kadib markii isaga oo dhaawac ah ay ciidanka Woyanuhu ku amreen inuu is dhiibo, sargaalka is dilay oo magaciisa lagu sheegay Mesafent Tegabu ayaa sheegay inuu yahay Wiilkii Boqor Tewodros, uuna is dilayo intii uu isu dhiibi lahaa ciidamada Taliska Faashistiga ah.
Dagaalada lagu Hoobtay ee kasocda duleedada magaalada Gonder ayaa noqonaya kuwii ugu Qalafsanaa ee Itobiya kadhaca tan iyo intii meesha laga saaray xukunkii Dergiga, waxayna dagaaladani niyad Jab iyo cabsi xoogan ku abuureen Taliska ciidamada Woyanaha oo Hub iyo ciidan tira badan u daabulay.